Jalabultii Ayyaana Masqalaa: Qophii Gubaa ykn Damaraa - BBC News Afaan Oromoo
Jalabultii Ayyaana Masqalaa: Qophii Gubaa ykn Damaraa
Guyyaan jala bultiin Masqalaa guyyaa wantoonni kabaja ayyaanni Gubaa ykn damaraa ittiin kabajamu itti guutamuudha. Nutis qophii ayyaana kanaaf taasifamaa jiru ilaalchisuun suuraawwan kanneen qindeessuun isinii dhiyeessinneerra.
Birraan barii'ee Oromoonni wayita xombora ykn guca guban 'meeqa guubdee?' jechuun umuriisaanii walgaafatu. Xombora muka urgaa'aa akka kasee fi muka ejeersaa itti makunis miira ayyanichaa caalaa akka nama hawwatu taasisa. 'Hiyyoolee, birraa birraa keelloo daraaree,' jechuunis sirbanii taphatu.
Gubaan jalabultii Ayyaana Masqalaatiif taasifama. Daraaraa keelloon waqtii masqalaa qofatti daraaruus mallattoowwan uumamaa birraan bari'uusaa agarsiisan keessaa tokko. Coqorsaafi daraaraa keelloo ammoo gaafa ayyaana waggaa akka hafaatti waan gargaaruuf haawwooliin hammachuun ykn bitachuun qopheefatu. Hafaa keessa ammoo arriittiin itti dabalamnaan urgaan manaa caalaa nama hawwata. Kanaaf egaa namoonni baayyeen hafaa bitachaan kan jiraniif.
Oromoon erga xombora gubee xumuree booda, boromtaa isaa loon hora buusa. Ofiinis malkaa bu’uun irreeffatee Waaqa isaa galateeffata. Gaafa jala bultii meeshaalee fi mi'oota kabaja ayyaanichaaf barbaachisan bituun dabarsa.
Gubaa xomboraa ijoolleerraa kaassee hanga jaarsooliitti hundu irraatti hirmaatu. Osoo abbaan warraa xombora qabsiifachaa jirus, haalooliin mula ijeersa itti suuqaa eebbaan badhaasuu. Kana boodas, waan dhugamuu fi nyaatamu qabatanii ollaa waliin waliin nyaachaa rabbiin galateefattu. Keessattuu guyyaa damaraa roobni roobnaan, barri suun bara quufaa ta'a jedhaame yaadama. Masqalli ol fuudhee nama ilaalaa waan jedhamuufis namaa-sa'ii quufanii akka bulan taasifama. Dargaggoonni ammoo alkan guutuu walitti qabamuun namoota faarsaa dheechisaa bulu.
Sirboota barii birraa sirbaman keessaa “Hiyyoo koo daree, yaa abaaboo daree….” jedhanii kan irreeffatanii galateeffatan isa tokkoo dha.